A malitere lọ Mgbasa Ozi! | Martech Zone
A malitere lọ Mgbasa Ozi!
Sunday, June 25, 2006 Satọde, Febụwarị 20, 2016 Douglas Karr
Mgbe izu ole na ole nke enweghị ụra na ọtụtụ awa, M na ulo oru Resort Publications na enyi m, Chris Baggott. Echiche bụ ihe Chris chere banyere mana ekwuru m ọtụtụ n'ime ntinye blọgụ m. Ihe ndekọ ederede na mpaghara (ịde blọgụ) na-aga n'ihu. Internetntanetị dị ka ilegharị anya na oghere… ụlọ maka saịtị ndị ọzọ enweghị njedebe ma na-eto ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ka web na-aga n’ihu na-eto eto, igwe na-achọ ihe ga na-adị mgbagwoju anya ma saịtị ga-agbasi mbọ ike maka nlebara anya.
Ekwenyere m na azịza nke a na-etinye uche site na mbipụta onwe onye. Blọọgụ bụ azịza zuru oke na nke a n'ihi na ahaziri ha aha. Ihe atụ m ji ndị mmadụ na-eme bụ na ọ bụ ihe dị iche n’etiti ịpụta n’ihu ụlọ ahịa gị ka ọ bụ ịpụ n’ekele. Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ bụ 'akara ngosi'. Ha anaghị ekwe ka ndị mmadụ hụ ndị mmadụ ma ọ bụ akụkọ n'azụ saịtị. Blọọgụ na-enye gị ohere ịgwa ndị mmadụ okwu ma nye ha ohere ikwu okwu azụ.
Resort Publications na-eweta akụkụ ndị a niile n'otu saịtị. Ọ bụ Nde (Resorts). O bu mpaghara (nke obodo na ebe onwere). Ma ọ bụ nke onwe… nke ndị folks nwere ma ọ bụ ndị mmadụ gara ebe ahụ. Anyị na-atụ anya na nsonaazụ njedebe bụ saịtị na-ewu ewu n'efu.
Tags: komendiumresotu akwụkwọụlọ nkwari akụndozi
Inspiration nke Ahịa